तुम्वाहाम्फेलाई कारवाही गर्ने तयारी – Weekly Nepal
कारवाही गरेर देखाउन उपसभामुखको चुनौती
तुम्वाहाम्फेलाई कारवाही गर्ने तयारी
in राजनीति — २८ पुष २०७६, सोमबार १०:४७
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा भित्र संघीय संसदको सभामुख चयन गर्न सकस परेको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले उपसभामुखबाट राजिनामा नदिएपछि सभामुख पद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुख तुम्वाहाफेलाई राजिनामा गर्न लगाएर नयां सभामुखको टुंगो लगाउने भनिएपनि उपसभामुखले राजिनामा नदिएपछि अहिले संसद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले सभामुखको नाम चयन भएपछि मात्रै आफुले राजिनामा दिने घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दल दुई खेममा बिभाजित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ नेता सुवास नेम्वाङलाई नयां सभामुख बनाउने एक सूत्रिय अभियान संचालन गर्नु भएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पूर्व माओवादी नेता अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउन लविङ गरी रहनु भएको छ ।
सापकोटालाई सभामुख नदिए प्रचण्ड उपसभामुख तुम्वाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने तयारीमा जुट्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले उपसभामुख तुम्वाहाम्फेलाई सभामुख बनाउन भित्रि रुपमा लागेपछि अहिले नेकपा भित्र शक्ति संघर्ष शुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको आडमा उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले दुई अध्यक्षलाई बालुवाटारमा भेटेर आफुले कुनै हालतमा पनि राजिनामा नदिने बरु कारवाही भोग्न तयार रहेको बताएपछि अहिले दुवै अध्यक्ष अफ्ठेरेमा परेको बालुवाटर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तुम्वाहाम्फेलाई कारवाही गर्ने कि सभामुख बनाउन भन्ने बिषयमा नेकपाका शीर्ष नेताहरु नऔपचारिक छलफलमा जुटेका छन । नेकपाका एक नेताका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उपसभामुख तुम्वाहाम्फेलाई च्यापेको कारण पार्टी र संसद नै बन्दी बन्न पुगेको छ ।
अव तुम्वाहाम्फेले राजिनामा नदिए कारवाही गर्ने र संसद पदबाट समेत हटाउने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पटक पटक स्थगित हुदै आएको संसद नेकपाका कारण बन्दी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदलाई अनिर्णय बन्दी नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले संसदलाई बन्दी बनाउने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै संसदको अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।
यता नेकपाका अध्यक्ष द्धय ओली र प्रचण्डले माघ ४ अघि नै सभामुखको टुगों लगाउन छलफल शुरु गर्नु भएको छ । उहांहरुले पार्टीको निर्णय नमान्ने उपसभामुखलाई जवरजस्ती गरेर भएपनि राजिनामा गराउने तयारीमा जुट्नु भएको बताइएको छ ।